My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၂၅ – ၆ – ၂၀၁၅	16
ဇီဇီခင်ဇော် says: နောက် ၅ နှစ် သူတို့ ပဲဆို
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အခုအချိန်မှာစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်လိုက်ကြစို့
ဦးဦးပါလေရာ says: .အခုရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အဆိုက ကြံ့ဖွတ်က ရေးဆွဲထားတဲ့
padonmar says: စိတ်မပျက်ပါဘူး၊မှန်းမိပြီးသားပဲတဲ့ ၊ဒေါ်စုက။
Courage says: အမေစု သမ္မတဖြစ်ရေးထက် လွှတ်တော်တွင်း အာဏာရရေးကိုပဲ ဆက်သွားတာပေါ့။ အကယ်၍ အမတ်နေရာ ၅၀% အထက်ရနေမယ်ဆို သူတို့လုပ်ချင်ရာကို လုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူးလေ။ သမ္မတ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် သူတို့ ချယ်လှယ်ချင်တိုင်း ချယ်လှယ်လို့ မရတော့ဘူးပေါ့။
Mike says: .ပြောချင်တာအတူတူမို့ ကိုကြီးမိုင်းစာလေးယူလာပေးပါတယ်
တောင်ပေါ်သား says: အရီးမြ
အောင် မိုးသူ says: ပလန်ဘီ
Ma Ei says: မျှော်လင့်ချက်လေး ရေးရေးထားမိတာ မှားမှန်းသိပါပြီ မလတ်ရေ
ဦးကြောင်ကြီး says: နီဒို့တွေ အားလုံး ဘောပွဲရှုံးဒဲ့ မြန်တျန့်တွေနဲ့ တလှေသံဒဲဘဲ… လူရှုံးဗေမှည့် လေနိုင်တယ်ကွ… ဩော်ဒါကြောင့်လှည်း မြန်တျန့်လို့ အမှတ်သညှာပြု ခေါ်တွင်သကိုး…
Ma Ma says: စိတ်မပူနဲ့။ ဒီလိုလူတွေ ရှိသေးတယ်။
Mike says: .Thetka Moe Nyo
မြစပဲရိုး says: . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု သူများ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: အမေ့ကို ကူမယ်…